The Best Winter ememme Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > The Best Winter ememme Na Europe
Ime ka ọtụtụ n'ime oyi na-atụ oge site na ịga na Best Winter ememme na Europe. The ememme abuana ihe niile si ski na snowboarding to egwu, ntochi, ice ọkpụkpụ, na-egbuke ngagharingosi parades. N'okpuru bụ anyị n'elu 5 roundup ihe ị ga-achọta na-eme na Europe na January na February.
Ka anyị malite na Ememme Oge Oyi na Europe, na anya anyị na-aga Scotland
Edinburgh Hogmanay bụ otu onye nke ụwa ji mma New afọ Celebrations, a n'ezie ọhịa na wooly uwe ime oge. Hogmanay bụ Scottish okwu maka Abalị Fotere Afọ Ọhụrụ na Edinburgh si Hogmanay ememme aghọwo otu n'ime ndị kasị ibu ememe Afọ Ọhụrụ na ụwa. Edinburgh si Hogmanay bụ a 3-ụbọchị ememme full nke ihe na-agụnye a torchlight edikan, dịrị ndụ egwu egwu, ezinụlọ ihe, a oke n'okporo ámá party, ọdịnala egwú, ezimezi oku, na ọbụna a costumed Nme na-agwụ na a oyi itinye na osimiri!
London nke Hyde Park Winter wonderland alaghachikwuru Hyde Park na 2018 na ya na-egbuke ice rink, nnukwu ekeresimesi, na njem na-atọ ụtọ. Jide n'aka na ị na-ego na-abata n'oge zere efu si na ịtụnanya agafe nwere ike na-ere si ngwa ngwa! Winter wonderland bụ notoriously ewu ewu, na anyị nwere ike depụta anyị Best Winter ememme na Europe enweghị banyere ya!
Ọkụ n'elu ọchịchịrị na ehihie na abalị nke Luxembourg City bụ Winterlights Luxembourg. Nke ọtụtụ ihe omume na ihe omume na-enye maka ezinụlọ ya dum, na Christmas ahịa anọgide a ike mmasị! I nwere ike na-atụ anya ejiri mee ngwongwo, uwe, ụmụaka, ngwa, na N'ezie (anyị mmasị) ọtụtụ na-atọ ụtọ nri dị nnọọ eche ga-edetụ ire! Site na omenala “nduku Kichelchen” ihe osisi na flavors si n'ebe dị anya-tụpụ ebe, e na-aghaghị ịbụ ihe maka onye ọ bụla.
Trier ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Venice n'oge The ejị bụ otu ihe gbawara nke na agba na-emepụta ejiji na creativity. Nke a na-eme maka a mara mma iche na nke chilly ọcha snow. ejị (ma ọ bụ "Ejị") na-otu n'ime ndị kasị ememe na Italy-na site Venetian masks na masquerade bọọlụ, ọ dịghị ebe ọ dị ka Venice! Dị ka echiche nke na-ahụ obodo na ya kasị festive na yi? Wee tinye nke a na gị na ndepụta nke Best Winter ememme na Europe.
Ikpeazụ anyị oke maka Winter ememme na Europe bụ: Amsterdam
Na-achọ ihe ọzọ cultured? Mgbe akwụkwọ gị tiketi ka ghe oghe ngosi akpọ Amsterdam Light Festival. The omume na-adọta ndị kasị mma na mba na mba ìhè nka ka ngosi ha ọrụ ofụri Amsterdam center na tinyere ya ama ọwa mmiri. Nke a afọ omume na-agba ọsọ site na 29 November 2018 ruo mgbe 20 January 2019. Kwa afọ, ọtụtụ narị nnyefe na-osụk site na-emepụta, architects, na nka si gburugburu ụwa.
The ìhè art nrụnye nke Amsterdam Light Festival mmiri ngosi ìhè ụbọchị ọ bụla si 5 pm ruo mgbe 11 pm. The Amsterdam Light Festival bụ na n'èzí na free maka onye ọ bụla. Great ohere iji aka nnukwu foto!
Bestzọ kasị mma na-enweta a ghota nke Winter ememme na Europe bụ ileta mmiri ngosi bụ ụgbọ mmiri. Companieslọ ọrụ ụgbọ mmiri Canal na-enye njem nlegharị anya pụrụ iche yana nka. The Amsterdam Light Festival irughari ewe 75 nkeji.
Ị chọrọ ileta ọ bụla n'ime ndị a Winter ememme na Europe? Mgbe ahụ, e bụ nanị otu ụzọ na otu ebe na-eme ya. SaveATrain, Ọ dịghị ntinye akwụkwọ ụgwọ, dịghị hassle! Book ugbu a!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / fr ma ọ bụ / pl na ndị ọzọ asụsụ.
#ememme #oge oyi #Oge ezumike europetravel longtrainjourneys ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel travelamsterdam Winter Winterholiday
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Train Travel The Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe